ANOSIZATO : Olona marary saina nianika “pylone” nitondra herinaratra
Nitolagaga ny mponina teny amin’ny manodidina an’Anosizato iny, omaly maraina, raha nahita olona iray nianika teny amin’ny andrin-jiro lehibe (pylone) izay mitondra herinaratra mahery vaika an’ny orinasa Jirama. 16 septembre 2020
Voalaza tamin’izany moa fa tsy salama saina izy io, ka tsy fantatra loatra izay tiany hatao teny ambony teny, izay mety hitari-doza goavana raha tsy nandraisana fepetra haingana. Nandray andraikitra avy hatrany ireo mpiasa tao amin’ny Jirama nanalana ilay olona tao.
Tsy maintsy notapahina aloha ny herinaratra tamin’ny Faritra vitsivitsy teto an-drenivohitra toy ny an’Ampitatafika, Itaosy, Ambohidrapeto, Digue, Andraharo, 67 ha Ambohibao, Isotry ary Isoraka sy ny manodidina. Nalaky tonga teny an-toerana rahateo koa ny mpamonjy voina nanavotra ity olona ity ka tsy tra-doza ity farany. Ora vitsy taorian’izay moa dia niverina tamin’ny laoniny ny herinaratra tamin’ireo toerana voalaza eo ambony ireo.